Raila o loogu baaqay in xilkan Madaxtinima uu an u tartamin doorashada soo socoto – The Voice of Northeastern Kenya
Raila o loogu baaqay in xilkan Madaxtinima uu an u tartamin doorashada soo socoto
Iyadoo wax yar 14 bilood ay kaharsan tahay doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo ayaa waxaa si aad u soo badanayaa is qab qabsiga u dhaxeeya Mas’uuliyiinta xisbiyada siyaasada.
Waxay hadda u muuqataa in siyaasinta Isbahaysiga Cord ay si aad ah ugu kala aragti duban yihiin qofka hogaanka u qaban lahaa isbahaysigaasi si uu ugu tartamo doorashada madaxtinimada dalka.
Hogaamiyaha xisbiga Ford Kenya sidoo kale kamid ah hogamaiyayaasha Isbahaysiga Mucaaradka ah ee Cord, Moses Wetang’ula ayaa ugu baaqay Raila Odinga in uu meel iska iloowo qorshaha uu ku doonayo in uu isku soo dharaxo xilka ugu sareyo dalka.
Wetang’ula oo aan ka qeyb galin safarkii shanta maalin qaadatay oo Ra’iisul wasarihii hore ee dalka uu ku marayay galbedka dalka ayaa sheegay in hogamamiyayaashi looga baahan yahay in uu siyaasinta kale u dhaafo xilka madaxtinmo maadama uu sedex goor oo hore uu u soo tarmtay islamarkaana uusan ku guuleysanin.
Dhanka kale Mas’uulkan ayaa hoosta ka xariiqay in dad badan meel isugu soo baxay aysan eheen in dhamaan ay kuwada taageriyaan oo a kuu wada codeynayaan.
Raila Odinga oo laba mar oo hre xilka madaxtinimada isu soo dharaxay ayaa u suurta gali waysay in uu kuguulseto.
Isbahaysiga Cord ayaa u muqdaa mid is afahan la’aa uu ka dhax jiro maadama sedexda hogamiye eek ala hogaamise sedexda xisbigi ee ugu weyn ee uu ku dhisan isbahaysigaasi uu mid walbo daneenayo in uu xilka madaxtino u isku soo dharaxo.
← Maxkamada Mombasa oo xukun ka gartay nin loo hestay ganacsiga faloosha maroodiga
8 Arday oo la xiray iyagoo qorsheenayay in ay dab qabadsiiyan dugsiyadooda →